admin, Author at myanmarpyi.com
==> Cheez ကရတဲ့ COS လိုပါဘဲ ။ Task တွေလုပ်ပြီး CCU coin တွေရပါမယ်==> အခုချိန်ကတည်းက စပြီး စုထားရင် အဆင်ပြေလောက်မယ်==> Chzeeတုန်းကရမယ်မယုံကြည်လို့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး အခု coin clubလေးရတုန်းပြန်လုပ်ပါမယ်==> မလုပ်ရသေးသူများလည်းလုပ်ကြပါရနိုင်ပါတယ် Reward : 72 above (Daily Claim) Refer : 100 CCU MarketPrice : $$$ (ဈေးကောင်းမယ်) 🙂 Need : Facebook / Gmail… Continue Reading →
==> Coinmarketcap မှာ စာရင်းဝင်ပီးသား Coin လေးပါ။ ==> Android APK နဲ့ ဝင် Claim ရုံပါဘဲ။ ==> Gmail / Phone / KYC လိုပါတယ်။ KYC လွယ်ပါတယ်။ ==> Android APK ဆွဲပြီး နေ့တိုင်း Claim ရုံပါဘဲ။ Reward : 20 instar (daily estimate) Refer : 50 instar MarketPrice… Continue Reading →
100$==> Onfocoin Airdrop
==> လတ်တလော Hot ဖြစ်နေတဲ့ Onfo coin လေးပါ။ ==> Facebook Account (or) Linkin Account နဲ့ Signup လုပ်ပေးရပါမယ်။ ==> Refer နေရာမှာတော့ shweaungkant ဆိုပြီးထည့်ပေးပါ Auto ကျလာပါလိမ့်မယ်။ ==> ပြီးရင် ဖုန်းနံပါတ် Verify လုပ်ပေးရပါတယ် Myanmar ပါပါတယ်။ ==> ပြီးရင် ကိုယ့်အကောင့် Name ထည့်ပေးပါ အဲ့Name နဲ့ Refer ပြန်ရှာရမှာ။ ==>… Continue Reading →
💰 50 VD = 0.0326 BTC 🤑🤑 Already open trade 1. LINK 👉 https://vindax.com/?ref=e89088522cc4a28554d03ff84dd52c27﻿ ☑️Verify Email ☑️Enable Two Factor Authentication! ☑️complete social media task Note: IN order to receive VinDAX Coin from this program, you must pass the KYC on… Continue Reading →
CHT ( exchange token ) မြန်မြန်လုပ်ထား ရမှာသေချာတယ်။ Receive 100 CHT = 50$ Register link: https://coinhe.io/r/24118 Here is the full step to claim 100 CHT =50$ Step 1. Register and confirm email Step 2. Confirm phone number and KYC KYC တင်ပီးရင်… Continue Reading →
16$ တန်ဖိုး Airdrop No need KYC 💎 Argentas 💰 Free 12499 AXU ($16.24) 📈 Market : Stellarport. Join Now 👉 Argentas is buildinganew global payment network and distributing some of their future global currency to early adopters. This… Continue Reading →
မင်းကိုတွေ့နေရတဲ့ရတဲ့ အခိုက်အတန့်က… နှလုံးသားကို ကြည်နူးစေတယ် သတိရစေတဲ့ အနမ်းလေးတွေကို ဆာလောင်စေတယ် [Read More]
need wings ပျံသန်းခွင့်တွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်လွတ်လပ်မှု့တွေရဲ့ အရသာကိုပြန်လိုချင်တယ် [Read More]
Determiners Part II 👉 Determiners အကြောင်း ( အပိုင်း ၂ ) 👈 [Read More]
ပျားသကာရည်နဲ့မလဲနိုင်ဘူး မင်းအနမ်းတွေက ချိုနေခဲ့တာ ဆောင်းတွင်းမီးတွေလှူံနေကြတာ [Read More]